लाजै पचाएर आफूभन्दा धेरै जेठी अभिनेत्री सँग अफेयरमा रहेका चर्चित अभिनेता - Mitho Khabar
October 18, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on लाजै पचाएर आफूभन्दा धेरै जेठी अभिनेत्री सँग अफेयरमा रहेका चर्चित अभिनेता
नवाबी खानदानकी अभिनेत्री सोहा अली खानको जन्म अक्टोबर ४ मा भएको थियो । उनले सन् २०१५ मा अभिनेता कुणाल खेमूसँग विवाह गरिन् । यी दुईको उमेर चार वर्षको अन्तर छ । अर्थात् सोहा भन्दा कुणाल चार वर्ष कान्छा छन् । तर सोहा र कुणाल मात्र यस्ता कम उमेर अन्तरका जोडी होइनन् । बलिउडमा यस्ता केही जोडी छन्, जसको उमेरको अन्तर निकै फरक छ । अर्थात अभिनेत्री श्रीमति भन्दा अभिनेता पतिको उमेर धेरै कम छ ।
सोहा र कुनाल
विश्व सुन्दरी भइसकेकी अभिनेत्री सुस्मिता सेन र उनका प्रेमी रोहनको अफेयर कोही कतैबाट लुकेको छैन । उनीहरुको प्रेम यसकारण पनि चर्चामा आयो कि सुस्मिता रोहमन भन्दा १६ वर्ष जेठी छिन् ।
रोहन र सुस्मिता
पछिल्लो समयमा यस अनलाइनमा प्रकाशित भएका खोजमुलक समाचारहरु कपि गरेर आफ्नो साइटमा राख्ने पाइएको हुनाले केटीएम दैनिकको अनुमतिबिना कपी नगर्नुहोला । अन्यथा नेपालको प्रतिलिपी अधिकार ऐन र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको Intellectual Property Right अनुसार उजुरी गरिने व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।
अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र उनका पति निक जोनासबीच उमेरको अन्तर निकै फरक छ । उनीहरुको शाही विवाह जोधपुरको उम्मेद भवनमा भएको हो । निक प्रियंका भन्दा ११ वर्ष कान्छा छन् ।
प्रियंका चोपडा र निक जोनस
बलिउड अभिनेता अर्जुन कपूर र अभिनेत्री मलाइका अरोडाको उमेर अन्तर पनि फरक छ । यो जोडी विगत केही समययता अफेयरका कारण चर्चामा छन् । उमेरको अन्तर हेर्ने हो भने मलाईका अर्जुन भन्दा १२ वर्ष जेठी छिन् ।
अर्जुन कपूर र अभिनेत्री मलाइका अरोडा
बलिउडकी सुन्दरी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र उनका अभिनेता पति अभिषेक बच्चनको विवाह सन् २००७ मा भएको थियो । यो जोडीलाई बलिउडको परफेक्ट कपल मानिन्छ । यो जोडी प्रायः अवार्ड कार्यक्रम वा पार्टीमा सँगै देखिन्छन् । ऐश्वर्या उमेरको हिसाबले अभिषेक भन्दा २ वर्ष जेठी छिन् ।
ऐश्वर्या राय बच्चन र उनका अभिनेता पति अभिषेक बच्चन
मेष राशि हुनेले वृश्चिक, मीन र कर्कट राशिसँग विवाह किन गर्नु हुदैँन् ? जान्नुहाेस्
आज फागुन ८ गते बिहिबार खप्तड त्रिवेणीको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस्, यी राशिलाई आज धेरै राम्रो छ !
February 20, 2020 mithokhabar
घर सबै चोरी सकेर जाने बेला चोरले ‘भाउजु निकै राम्री हुनुहुन्छ’ लेखेपछि !
June 21, 2020 Suman Pandey
‘पैसा धेरै भएर सहयोग गरेको होइन, संघर्ष गरेर आएको हुँ, अरुको दुख बुझ्छु’